Ciidamada ilaalada deegaanka dowladda hoose ee Xamar oo howlgalo ka wado suuqa Xamarweyne. | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Ciidamada ilaalada deegaanka dowladda hoose ee Xamar oo howlgalo ka wado suuqa...
Ciidamada ilaalada deegaanka dowladda hoose ee Xamar oo howlgalo ka wado suuqa Xamarweyne.
Ciidamada ilaalada deegaanka dowladda hoose Xamar ayaa bilaabay howlo lagu qaadayo ama lagu furayo wadooyinka xiran ee sida sharci darada ah looga ganacsado ee laga dhistay sandaqadaha iyo gaari ganacanada lagu iibiyo alaabaha iyo dharka noocyadiisa kala duwan.
Howlaahan lagu furayo wadooyinka dhex mara suuqa degmada Xamarweyne ee gobolka Banaadir ayaa ujeedadiisu tahay sidii wadooyinka sida sharci darada ku xiran looga furi lahaa shacabka iyo in la baneeyo marshibiyeeriga iyo wadooyinka dhexdooda ee ay ku ganacsanayaan ganacsatada soomaaliyeed.
Mudooyinkan danbe ayaa qaar ka mid ah suuqyada magaalada Muqdisho waxaa ka jiray ciriiri fara badan taasi oo keentay wadooyinka dexdooda iyo mirshibiyeeriyaasha oo ay ganacsiyo ka sameysteen ganacsatada yar yar waxaana ciidamada ilaalada deegaanka ay wadeen howlo lagu furayo wadooyin dhex mara suuqyada.
Previous articleWaaxda Jidadka iyo Bulaacadaha Dowlada Hoose ee Xamar oo diyaar garow ugu jirto roobabka la filayo.
Next articleWasiiru dowlaha Arrimaha Dibadda oo kala hadlay Ergeyga Qaramada Midoobey u diyaargarowga doorashooyinka Soomaaliya+(SAWIRRO).